Fehezo tsara ny fotoanao amin'ny Stopwatches marobe ho an'ny iOS | Vaovao IPhone
Fehezo tsara ny fotoananao amin'ny Stopwatches marobe ho an'ny iOS
Azo antoka fa androany dia iray amin'ireo andro mahazatra izay, amin'ny faran'ny maraina, na amin'ny faran'ny andro, dia mieritreritra ianao hoe: "fa nanao ahoana ny androko?" Indraindray tokoa dia "mandeha ny fotoana" ary tsy fantatsika tsara hoe inona no nataontsika.
Miaraka amin'ny «Stopwatches marobe» azonao atao mitazona fifehezana mahomby ny fotoanao, mba hahafantaranao hoe hafiriana ny fanatanterahana asa sasany, ohatra. Aorian'izay dia azonao atao ny mampiasa an'io fampahalalana io handrafetana tsara ny asanao, ny fotoanao, ny laharam-pahamehana amin'ireo hetsika. Jereo eto ambany.
Satria manasa antsika hieritreritra ny lohateny hoe, miaraka amin'ny "Multiple Stopwatches" dia ho afaka mampihetsika haingana sy mora ny timer miaraka amin'izay ilaintsika mitazona fifehezana mahomby amin'ny lafiny maro amin'ny fiainantsika andavanandro, ohatra, ny ora ampiasaintsika any am-piasana, ny fotoana tsy nifoka sigara sy bebe kokoa, ary koa hahitana amin'ny fomba sarobidy ny fotoana lanintsika hanao asa sasany mba hahafahantsika mandamina tsara ny fotoantsika.
Ho fanampin'izany, «Multiple Stopwatches» dia mampifandray ny sehatr'asa izay manao ny fitantanana ny lisitry ny famaritana anay Haingana ny maka sary an-tsaina (manome loko isan-karazany amin'ny famantaranandro tsirairay) amin'ny fomba iray izay ho ampy hikasika ny foibe famaranana hampiatoana azy io raha ny sisa kosa mandroso hatrany.
Tianao manomboha famantaranandro vaovaosa? Kitiho fotsiny ny marika "+", safidio ny loko tianao, mampidira famaritana fohy (ohatra, "Asa fanampiny") ary fehezo ny fotoanao. Amin'ny fikasihana iray dia hampiatoana azy ianao ary rehefa te-hanohy azy ianao dia kitiho indray. Ary raha te-hanomboka fihodinana vaovao ianao ao anatin'ny famantaranandro, tsindrio indroa misesy. Amin'izany fomba izany dia hahafahanao mirakitra ny ora fiasana fanampiny amin'ny herinandro, ny fotoana feno sy mahomby natokanao hianarana, ary maro hafa. Ary rehefa tianao hamafa ny famantaranandroNy sisa ataonao dia ny mandefa ny stopwatch miankavia ary misafidy ny safidy "Delete", toa ny ataontsika amin'ny mailaka na amin'ny Notes.
Ary ankehitriny, raha maika ianao, angamba afaka mahazo "Multiple Stopwatches" amin'ny vidiny antsasaky ny vidiny, 0,49 € fotsiny fa tsy 1,09 € izay vidiny mahazatra.
Stopwatch tsy misy fetramaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Fehezo tsara ny fotoananao amin'ny Stopwatches marobe ho an'ny iOS
Manomboka ny fizarana iPhone X amin'ny Apple Stores satria mitombo hatrany ny famokarana
Mpanamboatra kojakoja gaming Razer dia hanolotra smartphone amin'ny 1 Novambra